पैसाबारे दम्पती र साथीहरूबीच हुने विवादका चार कारण - BBC News नेपाली
हालै ब्रिटेनमा गरिएको एउटा अध्ययनका अनुसार सम्बन्धमा समस्या ल्याउने प्रमुख स्रोत मध्ये एक पैसा हो।
र यसको असर दम्पतीमा मात्र सीमित हुँदैन। यो परिवारका सदस्य र साथीसँगीसँग हुने समस्याको समेत कारण हो। र यस्तो अवस्थाको समाधान भनेको कुराकानी र पैसाबारे इमानदारी र खुला छलफल हो।
तर विवादको मुख्य कारणहरू के के हो?
तपाईँ खर्चालु हुनुहुन्छ या बचत गर्नुहुन्छ?
Image caption तपाईँका लागि बाल्यकालमा पैसा सधैँ अपुग हुन्थ्यो भने तपाईँ निकै खर्चालु व्यक्ति बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ
मानिसहरूबीच पैसाको विषयमा विवाद उत्पन्न हुनुको एउटा प्रमुख कारण भनेको यसको विषयमा उनीहरूको फरक दृष्टिकोण हो।
त्यस्तो दृष्टिकोणको निर्माण बाल्यकालदेखि नै हुन्छ जुन घरेलु वातावरण र अनुभवबाट सिर्जित हुन्छ।
तर यसको अर्थ तपाईँले सधैँ आफ्ना अभिभावकको सिको गर्नुहुन्छ भन्ने भने होइन। उदाहरणका लागी तपाईँका लागि बाल्यकालमा पैसा सधैँ अपुग हुन्थ्यो भने पछि गएर तपाईँ निकै खर्चालु व्यक्ति बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
र हामी पैसालाई यसको लेनदेनसँग सम्बन्धित सुविधाभन्दा माथि राखेर यसलाई अर्थपूर्ण बनाउँछौँ।
नयाँ सम्बन्ध सुरु गर्दा 'मेरो पैसा' र 'तिम्रो पैसा'लाई 'हाम्रो पैसा' बनाउन जटिल हुनसक्छ।
आफूहरूको पैसा कसरी बाँड्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने कुरा तिक्ततापूर्ण हुनसक्छ। पैसा आधाआधा गर्ने कुरा सधैँ उचित नलाग्न सक्छ।
त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू दुवै जनालाई मान्य हुने कुरा के हुन सक्ला?
त्यस्तै अवस्था परिवर्तन हुँदा पैसा बारे फेरी छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो नयाँ बच्चा जन्मेको अवस्थामा वा जागिर नभएको अवस्थामा। यस्तो अवस्थामा के उचित होला?
तपाईँहरू मध्ये एक जनासँग बाबुबाजे बाट प्राप्त भएको धनराशि छ। के तपाईँ त्यो बाँड्नुहुन्छ?
तपाईँसँग साथीभन्दा कम पैसा छ भने त्यसले तपाईँको सम्बन्धमा शक्तिको असन्तुलन उत्पन्न गराउन सक्छ। अरूमा भर पर्नुपर्दा निराशा महसुस हुनसक्छ।
"यस्तो महसुस भइरहेको थियो कि उनी भिसा (कार्ड) सँग सम्बन्धमा थिइन।"
"उनी हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध बाहिर मोजमस्ती गरिरहेकी थिइन," बीबीसी रेडियोका श्रोता जेम्स भन्छन्।
आफ्नी पत्नीले थाहै नदिई क्रेडिट कार्डको प्रयोग गरेर हजारौँ पाउन्ड खर्च गरेको थाहा पाएपछि उनले आफूमाथि धोका भएको महसुस गरे।
जब तपाईँ कुनैपनि सम्बन्ध सुरु गर्नुहुन्छ, एकआपसमा विश्वासको स्तर उच्च हुन्छ। तपाईँ आफ्नो साझेदारमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ।
तर पैसालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक परेको अवस्थामा भने उक्त विश्वासमाथि असर पर्नसक्छ।
त्यसकारण पनि तपाईँ आफ्नो खर्च गर्ने बानी बारे इमानदार हुनपर्छ र पैसा अनि खर्चबारे तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने कुरा खुला रूपमा छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ।
कसैले तपाईँसँग पैसा सापट माग्यो भने के गर्नुहुन्छ?
ऋण माग्ने अप्ठयारो अवस्थामा रहेका साथी हुन सक्छन् वा घर मर्मत गर्न वा नयाँ गाडी किन्न थप रकमको आवश्यकता परेको आफन्त हुन सक्छन्।
तपाईँले उनीहरूलाई निष्फिक्री ऋण सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर उनीहरूले त्यस्तो सहयोगलाई उपहारको रूपमा लिएर फिर्ता नगर्न पनि सक्छन्।
त्यस्तो अवस्थामा के होला?
यदि तपाईँ कसैलाई सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने प्रस्ट रूपमा कुराकानी गर्न आवश्यक हुन्छ। गलत बुझाइ नहोस् भनेर सहमति के हो भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुस्।
पैसाबारे कुरा गर्न उचित समय छान्नुहोस एक अर्कालाई सोधपुछ गर्न वा झगडा गर्न छोड्नुस। उचित समय निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
आफ्नो साथीलाई निराश नबनाउनुस् आफ्ना लागि उभिए पनि साथीलाई आरोप वा दोष लगाउने काम नगर्नुस्।
आफ्नो बजेट बारे नियमित रूपमा कुरा गर्नुस् तपाईँहरू दुवै समान धरातलमा हुनुपर्छ जसका लागि साप्ताहिक, मासिक वा पाक्षिकरूपमा छलफल गर्न जरुरी हुन्छ। तपाईँहरूले तय गरेको कुरामै बस्नुपर्छ वा त्यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ भन्ने बारे तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्छ।
खुलारूपमा कुरा गर्नुस् यदि तपाईँलाई आफ्नो साथीले आफूलाई बुझोस् भन्ने लाग्छ भने उनीसँग खुला रूपमा कुरा गर्न जरुरी हुन्छ।
एक अर्कालाई सुन्नुस् ध्यानपूर्वक कुरा सुन्नुस् र आफ्ना साथीले के भनिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयत्न गर्नुस्।
एक अर्काको सम्मान गर्नुस् आफ्ना साथीसँग विश्वास, सहकार्य र सम्मानको वातावरण तयार पार्नुस् ताकि तपाईँहरू दुवै जनामा अर्कोले कस्तो धारणा बनाउला भन्ने डर नहोस्।
पैसा जोगाउने केही तरिका:
उपहार योजनाबाट नलोभिनुस्। आफूलाई चाहिएको कुरा मात्र किन्नुस्। र आवश्यक परेको बेला मात्र किन्नुस्। एक सय रुपैयाँको सामान आधा दाममा किन्दै हुनुहुन्छ भने के कुरा सम्झनुस् भने तपाईँले ५० रुपैयाँ बचाउँदा त्यति नै रकम खर्च गरिरहनु भएको छ।
प्रलोभनबाट बच्नुस्: कुनै पसल वा व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने सूचना आउने इमेलबाट बाहिरिनुस्।
खानपानको बजेटबारे ख्याल राख्नुस्: खपत गर्ने सामान मात्र खरिद गर्नुस्।
यो सामग्री बीबीसी रेडिओ ४ को मनी क्लीनीक कार्यक्रममा आधारित हो।